Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy S ilaa Android 2.3.6 JVU | Androidsis
Francisco Ruiz | | Xididka Android, ROM, Samsung
Casharrada aan hoos ku soo bandhigno, sida cusboonaysii Samsung Galaxy S iyada oo loo marayo Oden si loo adkeeyo 2.3.6 iyo u dhigma Root, u adeegi doonaa, iyo waxyaabo kale, si loo rakibo Soo kabashada ClockWorkmod kuweena GT-I9000, si aad hadhow awood ugu yeelatid Rodi wax laga beddelay waxaana loo habeeyay bartayada.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan hubinno ayaa ah Samsung Galaxy S wuxuu marin u helayaa qaab DownloadSi tan loo sameeyo iyo iyada oo terminaalka gebi ahaanba la xidhayo waxaan ku shidi doonnaa isku-dhafka soo socda ee badhanka Hoos u dhig + badhanka guriga + Badhanka awoodda, waanu ku cadaadin doonaa isla waqtigaas oo annaga oo aan sii deynayn ilaa shaashad sidan oo kale ah u muuqato:
Soo gal mode Download
Hadday sidaas tahay, waxaan diyaar u nahay inaan rakibno qalabka JVU con Android 2.3.6 iyadoo la adeegsanayo qalab aasaasi u noqon doona aasaaskeenna Android, qalabku waa mid kale oo aan ahayn Odin waayo, Windows.
para bixitaanka Download mode waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad hoos u dhigtaa badhanka awoodda illaa toban ilbiriqsis, ama ku guuldareysato taas, ka saar batteriga illaa shan ilbiriqsi oo dib u dhig.
1 Diyaarinta rakibaadda
2 Habka rakibida qalabka qalabka
3 Habka rakibaadda CF
Maskaxda ku hay in adiga oo raacaya talaabooyinka casharkaan Waa inaad qaadataa masuuliyad buuxda wixii ku dhici kara aaladdaada, Haddii aad ku dhegan tahay tilmaamaha halkan, wax xun maahan inay dhacaan, laakiin in laga fikiro in markasta oo aan soo galno nidaamka gudaha ee Galaxy-keena ay jirto qatar hadii aynaan wax u qaban sida la tilmaamay.
Sidoo kale kahor intaadan bilaabin casharkaan waa in lagaa rabaa batariga laga bilaabo terminaalkaaga ilaa 100 jeer 100.
Waa inaan heysanaa dhamaan darawallada si sax ah loogu rakibay our PC, haddii aad rakibtay Kies oo aad si guul leh u waafajisay terminaalkaaga mararka qaarkood, waxaad horeyba u lahaan doontaa darawallada lagama maarmaanka u ah rakibidda, haddii kale, waxaad tagtaa bogga rasmiga ah ee Samsung oo soo dejiso nooca rasmiga ah ee ugu dambeeya barnaamijkan oo rakib oo isku xir qalabkaaga.
Kies barnaamijka rasmiga ah ee Samsung
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno markaan hubinno inaan marin u helno habka Download, waxay kala soo bixi doontaa dhammaan feylasha lagama maarmaanka u ah fulinta casharradan si guul leh, tan waxaan ugu lifaaqeynaa xiriiriyeyaasha labada barnaamijba Odin ee Windows sidoo kale isaga Rasmiga JVU Firmware iyo u dhigma CF xididka.
Kadib waxaan kuu daayay isku xirka a waa inuu lahaadaa feyl loogu magac daray Pit 512, taas oo muhiim u ah Flash adigoo isticmaalaya Odin annaga Galaxy, badanaa wuxuu ku yimaadaa gudaha kiniinka firmware ama del CF xididka, laakiin sida aan mararka qaar isku arkay layaab aan fiicnayn oo faylkan muhiimka ahi ka maqnaa, anigu shaqsi ahaan ayaan ugu lifaaqayaa si aad amaan ugu ilaaliso.
Marka faylasha oo dhan la soo dejiyo, waanu furi doonaa oo dhan meesha our Pc in aan aad u jecel nahay, waxaan kugula talinayaa inaad mid abuurto galka cusub ee desktop-ka oo ka wada fur iyaga dhammaan gudaha, dhammaantood marka laga reebo feylka ugu dambeeya, maadaama aan la isku dhejin.
Hadda waxaan ku dhaqaaqi doonnaa menu-ka Galaxy S oo aan dhaqaajineyno Qalabaynta USB, taas oo ku jirta wadada soo socota: Liiska / Dejinta / Codsiyada / Horumarinta.
Marka waxaas oo dhan la dhammeeyo waxaan awoodi doonnaa inaan cusbooneysiinno Oden annaga Galaxy S in version 2.3.6 oo ku rakib wixii u dhigma CF xididka.
Habka rakibida qalabka qalabka
Marka hore waan hubin doonaa taas Kies gebi ahaanba waa xiran yahay, tan awgeed waxaan u fureynaa Maamulaha hawsha Windows waana dhameystiri doonnaa geeddi-socod kasta oo xiriir la leh Kies, si fudud adoo fiirinaya magacyada dhammaan howlaha furan, haddii wax ku jiraan ereyga Kies meel aan waliba ka xidhi lahayn.
Hadda waxaan socodsiin doonnaa barnaamijka Oden waxayna na tusi doontaa daaqad sidan oo kale ah:
Odin shaashadda guriga
Marka xigta waxaan faylasha ku ridi doonnaa galka Firmware sida soo socota:
Waxaan ku ridi doonnaa faylka godka aan soo dejisanno ugu dambayn badhanka isla magaca, tan waxaan ku gujineynaa PIT-ka waxaanna mari doonnaa waddadii aan markii hore ku keydin jirnay.
Badhanka 'PDA' waxaan ku dhejin doonnaa feylka Fure ee qalabka aan la furin
Badhanka taleefanka waxaan ku dhejin doonnaa faylka 'modem'
Badhanka CSC waxaan ku dooran doonnaa feyl la yiraahdo CSC
Waxaan hubin doonaa in sanaadiiqda nooca ah Liiska hubinta xulashooyinka waxaa lagu calaamadeeyay dhanka bidix Dib-u-Qaybinta, Dib u bilawga Awood y F. Waqtiga Dib udejinta.
Si aad u hesho nabadgelyo dheeraad ah fiiri sawirka aan hoos ku soo lifaaqayo:
Tani waa sida Odin ay tahay inay adiga kuula ekaato
Marka wax walba la hubiyo, waxaan gabi ahaanba damineynaa Galaxy, oo waxaan ku shidi doonnaa isku darka badhannada aan kor ku soo xusnay Qaabka soo dejinta, waxaan ku xireynaa kombuyuutarka oo waxaan ka hubineynaa shaashadda Odin inay si sax ah u aqoonsatay, tan darteed waxay na tuseysaa ereyga COM waxaa ku xiga lambar bidixda kore ee kore.
Hadda waa inaan riixnaa badhanka Start oo ha taaban waxba illaa hawshu dhammaato oo qaybta bidix ee sare wuxuu ku wargeliyaa erayga Pass, Waxay tagaysaa iyada oo aan la odhan waa in aynaan ahayn, inta hawshani socoto ka jar telefoonka xaalad kasta oo jirta, iyo sidoo kale ka hortagga kumbuyuutarkeena inuu soo galo ama joojinama hibernación Wax sidan oo kale ah.
Nidaamku wuxuu qaadan karaa xoogaa ilaa shan daqiiqo. Ilaa aan ka aragno erayga PASS waxba ha taaban, mar hadduu na siiyo Pass taleefanka waan ka jari karnaa kumbuyuutarka oo waxaan sugeynaa inuu dib u bilaabo.
Habka rakibaadda CF
Tallaabada hore waxaad ku cusbooneysiin doontaa Galaxy si sax ah oo si buuxda u shaqeynaya nooca Android 2.3.6, talaabadan xigta, waxaan ugu hibeyn doonaa iyada oo loo marayo isla qalabkii lagu rakibi lahaa a Firir khaas ah la socota Root iyo Soo kabashada ClockWorkmod rakibay.
Hawshan ka dib waxaan diyaarin doonaa Galaxy oo aan ku rakibno wixii Rom ah ee is waafajinaya iyada oo loo marayo Soo-kabashada la beddelay
Waxaan mar kale fureynaa Odin, haddii aan horey u furneyn kahor, waanu xidhi lahayn oo waanu furi lahayn, markan faylka ayaan dhex dhigeynaa galka CF xididka, qayb ahaan PDA Odin, mana dooran doonno wax faylal ah oo dheeri ah.
Waan hubin doonaa taas Dib-u-Qeybinta lama hubin markan, labada ikhtiyaar ee kale waa in la xusho, sidaa darteed shaki kuma jiro waxaan ku lifaaqayaa shaashadda sida wax walba u noqon karaan markan:
Marka la hubiyo in wax waliba yihiin sida sawirka ku lifaaqan, waanu daminaynaa Galaxy waana soo celin doonaa Qaabka soo dejinta, markii aan daaranno waxaan ku xiri doonnaa PC-ga waxaanan siin doonaa ikhtiyaarka Start daaqada Odin.
Markan hawshu way qaadan doontaa in ka yar hal daqiiqo, sida ugu dhakhsaha badan ee Odin uu ereyga noogu soo celiyo Pass, waxaan ka jari karnaa taleefankeena kumbuyuutarka oo aan sugeynaa inuu dib u bilaabo.
Tan waxaan ku yeelan doonnaa Wareegtay, Soo kabashada wax laga beddelay oo loo cusbooneysiiyey nooca Android 2.3.6.
La soco daabacaadaha cusub maadaama aan kuu soo bandhigi doono Roms-ka ugu fiican qalabkeena, labadaba Gingerbread sida tii ugu dambaysay Ice Cream Sandwich con Android 4.0.
Macluumaad dheeraad ah - Samsung ma cusbooneysiin doonto Galaxy S iyada oo leh qiime kasta oo qiimo leh
Soo dejiso - Kies, Oden, firmware, CFroot, Godka 512.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S, ku cusbooneysii adoo adeegsanaya odin ilaa firmware 2.3.6 iyo xididkeeda CF
351 faallooyin, ka tag taada
Tani waa dhacdo?
Tani waxay shaqeysaa 9003? Salaan
Ma shaqeyneyso, terminaal kasta wuxuu leeyahay shirkado u gaar ah
Sideen ku sameeyaa hadii aan taleefankayga gacanta u dhigo qaab odin ah iyo khad cagaaran oo aan dhicin…. c ah ayaa ku hadhay sidii loo calaamadeeyay, maxaan ku sameeyaa xaaladdaas 🙁
Ku jawaab Marlis
Waxaan arkaa in boostada ay dhowr sano jirsato mana garanayo haddii aad aragto farriintan.
Waa markii iigu horreysay ee aan helo sharraxaad isku xiran oo ku saabsan sida looga soo kabsado i9000.
Sideedaba, dhibaatadaydu waxay bilaabantay markii adeegga iga dhammaaday. Waxay soo baxday in IMEI loo beddelay 00499… ..
Waxaas oo dhami waxay yimaaddaan maxaa yeelay waxaan isku dayayaa inaan wareejiyo (superuser) mana ii oggolaan doonto. Haddii aad hayso wax talo ah runtii waan ku qanacsanahay.
Ku jawaab albant77
Tan waxaan ku sameeyay taleefankayga wuuna dhintay wuxuu ahaa 9003,
Sideen u soo nooleeyaa?
Ku jawaab Thomasdinamarcav
Si aad u bilowdo casharradan waxaa loogu talagalay Galaxy S, ama GT-i9000, maadaama aad billowday biligleynaya gt-i9003. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad hubisaa haddii ay u shaqeyneyso qaabkaaga.
Hubi haddii aad wali marin u leedahay qaabka Soo-dejinta, haddii ay sidaas tahay, weli waad dib ugu cusbooneysiin kartaa qalabka saxda ah.
Ismaaciil Moraño dijo
Noloshayda kuma siin karo mobile-kayga Waxay igu dhacdaa si la mid ah sida intiinii badnayd. Telefoonku wuu dansan yahay oo dib uma shidi karo, xitaa qaabka soo dejinta! Waxaan rajeynayaa in qof xal i siiyo! 🙁
Jawaab Ismael Moraño
xiriiriyaha xididka CF wuu jabay ... wax kale oo lagu beddelan karo?
caanaha! Maxaad u tirtirtay cusbooneysiinta boostada ICS?
joaquin ma jiro, wanaagna uma aha 9003
Isku xirka feylka CF hadda ma shaqeynayo, dib ma u soo diri kartaa?
Ku jawaab Axotla
Horaa dib loo soo galiyay
Ma jiraa qof og sababta ay waqti dheer u qaadato, ievo sida 20 daqiiqo Waxaan wali ugu talagay SBL geeska bidix ee kore iyo baarka galakeyga kaliya wuxuu marayaa boqolkiiba aad u yar, qofna ma garanayaa sababta? maxaan sameeyaa Aad baan kuugu mahadcelin lahaa.
Ku jawaab elchui
Sideen ku dhammeeyay sheyga saaxiib, sifiican ma kubilaabtay?
Dib u dhigis dijo
faylka CF hadda lama heli karo
Miyaad mar kale soo rogi kartaa?
Sanches 992 dijo
Waxay ii sheegtaa inaan dhaafo, laakiin markay bilaabanto waxay ka muuqaneysaa shaashadda SHAQAALAHA KEYBORD MUUQAALKA AH laakiin shaashadda uma shaqeyneyso sida muuqata cadaadiska dartiis oo jawaabna ma siinayo, maxaan sameeyaa?
Jawaab Sanchez 992
Noocee taleefan ah ayaad haysataa compi?
wax walba oo aad u wanaagsan, sharaxaad fiican.
Mahadsanid ayaa lagugula taliyay
wax walba way fiicnaayeen oo waqti aad u gaaban, aad ayaad u mahadsantahay.
Ku jawaab Csramostoro
Mahadsanid !!! wax walba waxay u shaqeeyeen si qumman ... waxa kaliya ee jira ma ogi sababta, laakiin 3G ma shaqeynayo aniga ... Ma aqaano inay sabab u ahayd cusbooneysiinta ama inay jirto wax si qaldan loo qaabeeyey ... qadariyo wixii talo bixin ah! SAlu2
U jawaab Ibraahim
Haddii ay weli adiga kuu shaqeyso
3G sidoo kale aniga ima shaqaynaynin wixii aan sameeyayna waxaan u wacay shirkaddayda (Euskaltel) taleefoon ayaanu ku habaynay qaybta ka mid ah »Shabakadaha Moobaylka - Magacyada Helitaanka - Abuur goob cusub oo marin loo helo» halkaasna waxaan ka buuxiyay xogta Maxaa way ii sheegayeen, imika 3G ayaa ii shaqaysa.
Waxaan soo maray dhibaato umuuqata mid aad u culus. : S
Way kufashilantay rakibida 'CF ROOT' oo imika aniga ima bilaabo. Waxaan arkaa astaan ​​taleefanka gacantu ku xidhan yahay kombuyuutar oo leh calaamadda halista (saddex-xagal huruud leh calaamadda dhawaaqa) dhexdooda. Waxaan isku dayaa inaan damiyo, gala qaabka soo dejinta ... laakiin ma jirto wado. Aniguba sidoo kale waan ka saaray batariga laakiin markaan dib u dhigay, astaamaha farxada leh ayaa mar kale soo muuqanaya Maxaan sameyn karaa?
Hagaag, waxaan ku guuleystey inaan ka soo baxo leben-nuskii aan galay. Waxaan ka saaray baytariga iyo SIM-ga ilaa nus saac. Waxaan dib u dhigay batariga (ma aha SIM) oo waxaan isku dayay inaan galo habka Download. Way ii shaqeysay. Kadib waxaan dib u cusbooneysiiyay qalab 2.3.6 oo leh Odin telefoonkiina waa la soo nooleeyay. Ma aqaano meel aan qalad ku sameyn lahaa laakiin cabsida ka dib uma maleynayo inaan rakibayo CF ROOT
Kuwa u muuqda nus-bulukeetka sawirka saddexagalka iyo kumbuyuutarka, ama kuwa dhibaatooyinka ku qaba nidaamka sbl, in rakibida odin aysan horay usii soconin, halkan waxaan kaaga tagayaa cashar aad u wanaagsan http://www.carvax.com.mx/2012/01/26/reparar-galaxy-s-i9000t-de-semibrick/
Iyo haddii aynaan marin u helin qaabka Download?
Ku jawaab Amparo
Haye arag, waxaan sameeyay wax walba oo raacaya tillaabooyinka illaa shaashadda ay mugdi ka gashay qaabka soo dejinta markii odinku dhammaaday, waana kala furay. hadda ma shideyso, ma dalacayso ama ma muujineyso calaamadaha nolosha. Miyaa la xallin karaa?
Miyay odinku ku siisay PASS?
Isla midaas ayaa igu dhacday: Waan ogahay waxaad qabatay ???
Ku jawaab stifleeer
Isla waxbaa igu dhacay sidaad u hagaajisay
si ay u sii noolaato waa inaad raacdaa tilmaamaha, laakiin markaad batteriga ka baxdo, ku darso furayaasha isku dhafan oo soo degsashada halkaas ka soo muuqan doonta mar labaad ayaad sii wadaysaa inaad rakibto inta hartay –– ma dhiman !! ! kaliya kooma hehehej yeelzu_22hot
Ku jawaab yesicazz
Waan cusbooneysiiyay laakiin hada shabakadu iima aqoonsana, waan wici karaa laakiin ma isticmaali karo Internetka kumana habeynkaro waraaqaheyga? maxaan sameeyaa
Ku jawaab bonilla18luis
Gali xiriirada wireless-ka ah iskuna keydi macluumaadka APN, adigoo wacaya hawl wadeenkaaga ayaa iyaga siin doona.
saaxiib waa maxay furaha sirta ah ??? del pda, taleefan iyo csc si aad u kala furfurto faylka rarka
Ku jawaab Hellmasterlinux
samfirmware.com, wuxuu ku dhejiyaa boostada
Maxaad sameysay si aad u xalliso, haddii ay tahay xal ma leedahay?
ku dheji APNs-ka goobaha shabakadda moobiilka
Ku jawaab Elfabigb
Maxaad sameysay Isla waxaas ayaa igu dhacay shalay ...
dhibaatada jirta ayaa ah in qaabka kumbuyuutarkaaga uusan la mid aheyn kan qoraalkan ku qoran, isla waxbaa igu dhacay aniga, cinwaanka qoraalkan ma cada, waad sameyn kartaa qaladaadkaas, kumbuyuutarkeygu waa galaxy S gt- i9003, boostadani waxaa loo sameeyay qaabka gt-i9000. Waan ka xumahay inaan kuu sheego inay khiyaameeyeen taleefannada gacanta iyo inaad iyaga hagaajiso waa inaad isticmaashaa wareeg gaar ah oo ku xiran taleefanka USB-ga taleefanka. Sidii aan u iibsaday taleefanka gacanta dhawaan, wali wuxuu haystaa damaanad, markaa waxaan u geeyay adeegga farsamada oo markay ogaadeen inuu cillad gaagaaban oo macquul ah tahay, waxay u beddeleen mid cusub.
Waad salaaman tahay, horeyba waan uheystaa mobilka sifiican wax walbana sifiican ayey ushaqeeyaan, laakiin markaan rabo inaan soo dejiyo xididka CF, waxay umuuqataa inay lasocoto barnaamij kale, ok, waan soo degsadaa barnaamijkaas, wax walba waan rakibay laakiin CF Root ma jiro, ma i caawin kartaa ... ..
Waxaan uga dhaqaaqay super novice ilaa super user toosh! Laakiin waxaan haystaa dhibaato la mid ah tan bonilla18luis, inkasta oo aan dhaqaajinayo meertada hadana kuma xirna shabakadda, shabakadaha mobilada waxaan ku xiraa shabakadayda (Boda fone) waana isku mid ... (http://www.vodafoneteayuda.es/2011/12/habilita-la-conexion-a-internet-en-tu-terminal-con-android/) Aniguna ma sameyn karo ... Waan isticmaali karay xoogaa caawimaad ah!
Salaan ka timid Raval aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay !!!
Ku jawaab Bitxobola
BLOG-ga waxaad ku heleysaa Warqad ku saabsan sida loo qaabeeyo apn
Markay ahayd 06/11/2012 04:35 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Paola Dominguez dijo
Ma lihi ikhtiyaarkaas !!! waxa aan sameeyo
Ku jawaab Paola Dominguez
Gali Settings / Wireless iyo shabakadaha / shabakadaha mobilada / Apn oo abuuro APN cusub oo leh xogta shirkadaadu ku siin doonto.
Caawinaad ise waa dhammaan tillaabooyinka waanan daaraa waxaanan helayaa shaashadda shaashadda shaashadda mana ii oggolaanayso inaan hore u maro
Jawaab ku qor
gudaha galka CF ROOT SALE zIMAGE, LAAKI MA OGOL IN LAGU SAMEEYO WAXYAABAHA LAGU SAMEEYO OOD… Miyaad Dib U Qori Karta?
Ku soo jawaab TAVISAN
Taasi waa sababta oo ah waxaad fureysaa feylka .tar oo uma baahnid inaad furtid, waa inaad u adeegsataa cfrootxxxxx.tar in odin.
Isla waxbaa igu dhaca mana garanayo sida loo saxo.
Cfroot maahan fayl, waa feyl .tar, waana midka ay tahay inaad si toos ah ugu adeegsato odin.
Ku jawaab Tudelaiseguer
Victor Andres Delgado Ramirez dijo
Waad salaaman tihiin, saaxiib aad u wanaagsan fiidkii, su'aal aan ku rakibey nuucaan 3 jeer iyo wax aad u la yaab badan had iyo jeer igu dhaca aniga oo aqriya ku dhowaad dhammaan faallooyinka waxaanan u maleynayaa inay aniga uun igu dhacday waana waxa ku xiga ee markaan xidho qalabka ama dib u dib markii aad daarto, wuu sii joogaa Iyadoo aan lahayn codad fara badan, waxaan ula jeedaa, jalaska ayaa dhacaya marka wicitaan la soo diro. Ogeysiisyada Facebook iyo waxyaabaha kale ee lagu sheekeysto waxa kaliya ee aan ka dhawaajin waa mugga multimedia iyo mugga nidaamka, ogeysiinta iyo wicitaanka soo socda, sidoo kale sifiican ayaan u shaqeeyaa mana sii ogeyn waxa la sameeyo haddii aad ogtahay waxa dhacaya fadlan iga caawi aniga waxaan u maleynayaa inay tahay nooc aad u wanaagsan tan iyo markii aan rakibay kuwa kale waana tan ugu fiican fekerkeyga aad ayaad u mahadsan tahay hadaad rabto inaad i caawiso fadlan kudar fbkeyga victor860609@hotmail.com mahadsanid iyo salaan
Jawaab Victor Andres Delgado Ramirez
Marka dib loo bilaabo, waxay i weydiisaa lambar sir ah, waxay dhahdaa xaqiiji lambarka sirta ah.
Ku jawaab Tejadong
Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto Sim
si aad ufiican wax walbana sifiican ayey kudhaceen hada SGS-kaygu wuxuu leeyahay aqoonsi wajiga, tifaftiraha sawirka, sg2s furid iyo sawir qaadis iyo duubista fiidiyowyo wanaagsan tuto hadda waxaan u socdaa qoraalka cusbooneysiinta ee aad hadda soo dejisay !!!! Hambalyo !!!!
Salaan !! Dhibaato yar ayaan ku qabaa waxaas oo dhan, mana garanayo haddii ay i gelineyso qaabka soo dejinta, maadaama aan sameeyo isku dhafka saddexda badhan oo waxaan helayaa liis aan ikhtiyaar u soo dejisan karin sidoo kalena ma helayo android majarafadda, marka waxaan galiyay odin-ka aniga ayaa ii ogaanaya, wax walbana meeshiisa ayaan galiyay waxaan siiyay si ay u bilawdo wax walbana waxay bilaabaan inay shaqeeyaan laakiin waxay ku sii jiraan isku xirnaanta .. si aad saacado u dhejin karto. Maxaan sameyn karaa, aad baad u mahadsan tahay !!! Emailkeyga ayaan kuu dhaafayaa iavp79@hotmail.com. Mar labaad mahadsanid
Dhab ahaantii isla aniga ayaa igu dhacaya, waxaa lagu qabtay SetupConnection mana shaqeyn doono ...
Aniga qudhaydu waan jawaabayaa haddii ay cid u shaqayso. Furaha sirta ahi waa midka aad u isticmaasho inaad ku furto shaashadda (ma aha pin-ka shabakadda moobiilka)
Ma leedahay terminal-ka xididaysan?
Marka laga hadlayo dhibaatadan, waxaan leeyahay terminal wareegsan oo waxay ku sii jirtaa Setconection, maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Nietodan
Haye, waxaan sameeyay talaabadii ugu horeysay shaashadeyduna mugdi ayey gashay waxaana loo maleynayay inay dib u bilaabatay, maxaan hada sameeyaa
saaxiib maxaad sameysay Sidii oo kale ayaa igu dhacday
Sidii oo kale ayaa igu dhacday….
Ku jawaab celu_muerto
jair alfonso ramirez dijo
ma ku guuleysteen in ay taas hagaajiyaan?
Ku jawaab jair alfonso ramirez
dhibaatadu waxay tahay in qaabka qalabkaagu uusan la mid ahayn kan qoraalkan, isla waxbaa igu dhacay, cinwaanka qoraalkan ma cadda, waad sameyn kartaa khaladaadkaas, kumbuyuutarkaygu waa galaxy S gt- i9003, boostadani waxaa loo sameeyay qaabka gt-i9000. Waan ka xumahay inaan kuu sheego inay khiyaameeyeen taleefannada gacanta iyo inaad iyaga hagaajiso waa inaad isticmaashaa wareeg gaar ah oo ku xiran taleefanka USB-ga taleefanka. Sidii aan u iibsaday taleefanka gacanta dhawaan, wali wuxuu haystaa damaanad, markaa waxaan u geeyay adeegga farsamada oo markay ogaadeen inuu cillad gaagaaban oo macquul ah tahay, waxay u beddeleen mid cusub.
Lluis Aguila Fosch dijo
Jawaab Lluís Aguilà Fosch
On Samsung Galaxy S Captative i897 nidaamkan ma lagu samayn karaa? Waa aniga oo kor ka akhriyey GT-I9000 maaddaama aan ku cusub ahay tan, wax fikrad ah kama haysto taleefannada Andriod. Miyuu qof ii sheegi karaa haddii aan haysto qalab 2.3.5 ah miyaan ku dhejin karaa 2.3.6 habkan?
ma awoodid, waa aalado kala duwan.
Tani maahan oo kaliya GT-i9000
UstaDayaanna 1998 dijo
su'aal marka xididka laabanaayo dhammaan xogta iyo codsiyada waa la tirtiri doonaa?
Sida dhowr ka mid ah kuwa hoose soo dhigay, aniga kadib markii PASS uu ku soo baxay cusbooneysiinta android-ka, wey ku dhegtay ka dibna ma daarin ama ma bixin wax calaamado ah, waxaan ka saaray batteriga, waxaan isku dayay inaan soo kabsado oo aan la soo dego iyo ma bixinayo calaamado! Maxaan sameyn karaa: S
Waxaan hayaa Samsung Galaxy S laakiin nooca uu leeyahay Digital TV Tuner. Haddii aan dalbado nidaamkan, miyaan sii wadi doonaa helitaanka TV-ga? Aad baad u mahadsantahay!
Ma aaminsani, saaxiib, wax kasta oo aan ahayn cusbooneysiin rasmi ah, ma aaminsani inay xanbaarsan tahay dalabkaas, xitaa ma aqaan.
Sikastaba waad ku mahadsantahay inaad ii jawaabtay
Yuusuf A. Peters dijo
Kuwa ku jira leben nus ah waa inaad sameysaa dhammaan tallaabooyinka rakibaadda qalabka 'firmware' ka dibna dhammaadka soo gal goobaha taleefanka gacanta oo dib u dhig qashin-qubka USB-ga haddii kale xididka cf ma aqbali doono iyaga odin
Jawaab Jose A. Peters
Gacaliye qaali talaabooyinka oo dhan, markaan taleefanka gacanta ka jaray shaashaduna mugdi bay ahayd mana jawaabto Waxaan ka saaray batteriga mana jawaabayo ama qaab dajinta
Ku jawaab Gustavolorca
U oggolow xoogaa in ay ku nasato bilaa batteriga oo ay dib ugu noqoto qaabkii soo kabashada, oo ay wax walba mar labaad u iftiimiso, adiga oo fiiro gaar ah u leh flash-ka ugu horreeya ee lagu calaamadeynayo Dib-u-qaybinta, iyo tan labaadna, Kernel ama cfroot, haddii aan la calaamadin , Waxaan ku celinayaa ha calaamadin dib-u-qaybinta
Stephi veronik dijo
hello Waxaan haystaa ciyaaryahanka galaxy (ypg70) iyo toddobaad ilaa hadda ma ciyaarayo multimedia; Ma ciyaarayo muusikada (wuu burburayaa oo qalad ayaa ka muuqda dalabka), digniinaha ma dhawaaqayaan, ma duubi karo cod ama fiidiyoow, ma ciyaaro YouTube (shaashad madow ayaa jirta) ama raadiyaha. Waxaa xusid mudan in aan la joogo 3 usbuuc, way isiisay (hadaanan haysan qaansheegta aan ugu diro xarunta adeegga / damaanad qaadka) ……… anigoo adeegsanaya wada sheekaysiga shaqaalaha samsumg ayaan dib udajiyay si aan u gaaro qiyamka warshadda waxna lama xallin dhibaatada …………. ma i caawin kartaa?????
Jawaab Stephi Veronik
Miyuu galayaa qaabka Download?
Adiga oo ka bilaabaya terminal-ka dami, daar adiga oo riixaya badhanka Volume-ka oo lagu daray guriga oo lagu daray awood, oo ii sheeg haddii aad aragto calaamado huruud ah oo leh Android dhisme ah.
Waxaan raacay tilmaamaha salka warqadda taabashaduna ma shaqeyneyso…. caawi fadlan.
Waa maxay Taabashadu?
Antonio Duraan dijo
shaashadda taabashada ma shaqeyso…. Waxaan helaa lambar sir ah oo xaqiijin ah waxbana ma qaban karo, waan damiyaa waana soo noqdaa. fadlan caawi
Ku jawaab Antonio Duran
Dib-u-billow bilowgii adigoo fiiro gaar ah u leh dhammaan tallaabooyinka.
Waxaad iiga sheegeyso erayga sirta ah ee aanan maqal intaan noolahay.
Isla wax baa igu dhacay sidee ku xalisay?
Anigu garan maayo waxaad u jeeddo, sheeg wax yar oo intaa ka sii badan.
Sikastaba, marlabaad waan ifi lahaa.
Sergio Castillo Yrizales dijo
Isla taas ayaa igu dhacday, shaashadda taabashadu ma shaqeyso, si kasta oo aad u siiso oo aad u siiso, shaashadda taabashadu ka jawaabi mayso ... ma ogtahay haddii xal jiro?
Jawaab Sergio Castillo Yrizales
Ma loo baahan yahay in xidid la noqdo?
ma u baahan tahay xidid?
Saaxiib looma baahna
Subax wanaagsan, waxaan haystaa s2 la sii daayay oo bilaash uma ahan dukaan, ma cusbooneysiin karo mar walbana waa inaan u geeyaa dukaanka, wax lacag ah layguma soo oogin laakiin waa xanuun dameer, waxaan qiyaasayaa in barnaamijkaan uu sameyn karo laakiin calaamadda android ka shaqeysa digniinta kaliya ayaa u muuqata et .mise maxaan sameyn karaa fadlan?
Ku jawaab franck
Waad ku furi kartaa Samsug Galaxy S naftaada adoo adeegsanaya Galaxy Unlock oo aad ka heli doonto Play Store.
Su'aal, waxaan ku sameeyay wax walba casharka, tan ayaa dhacda:
OSM> MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 waa ansax.
GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5 waa ansax.
Hubinta MD5 si guul leh ayey ku dhammaatay ..
Ka tag CS ..
Odin v.3 matoor (ID: 4) ..
Falanqaynta feylka ..
Calan faylka PIT ..
HADA HA DAMIN !!
Waxay marayaan qiyaastii 20 daqiiqo mana dhaqaaqin haba yaraatee, waxay ku sii socotaa SET PARTITION sanduuqa kor ku yaal waxna rar ma saaraan .. miyaan sii sugaa mise maxaan sameeyaa?
PS: Waa Galaxy S 9000
Ku jawaab Yamiztc
Bcalvo 2006 dijo
Waxaan qabaa isla dhibaatada aad sheegaysid
Ma xallin kartaa?
Dejinta menu / isku xirnaanta / shabakadaha mobilada / apn, haddii dariiqaani uusan ikhtiyaar u muuqan, dhagsii si aad ugu darto APN cusub oo xulashada koowaad ku dheji internet Yoigo, ka dibna kan labaad waxaad gelisaa internetka, riix batoonka gadaashiisa oo xulo APN in hadda waan abuurnay, waxaan dib u bilawnay Galaxy-ga iyo dhibaatada la xaliyay. Waxaan rajeynayaa inay kuugu adeegi doonto sidaan isku dayay nooca 4 laakiin wicitaanada leh viber ma aysan maqlin laakiin wicitaan caadi ah haddii ay taasi shaqeyso, sidoo kale waxaan isku dayay barnaamijyo kale waxna uma eka sida toogashada nooca 4
Waxaan sameeyay wax walba sida tuto, odin ayaa i siisa kaarka, unuga wuxuu ku haraa shaashad madow, ka saar batteriga mana shidna ama qaab download ah, fadlan waan quusanayaa, 2 todobaad ka hor waan iibsaday
Malaguño 91 dijo
Waxaad tahay nin aad u weyn, waan u sameeyay sidaad tidhi wax dhibaato ahna kuma qabin.
Aad baad u mahadsantahay iyo salaan aad u weyn.
Waxaan raacay talaabooyinkaaga ilaa warqada shaashadda taabashadana kama jawaabeyso ...
Isla waxaas ayaa igu dhacay, waxaan u baahanahay inaan ogaado waxaan sameeyo, taleefankaygu wuxuu igu leeyahay xaqiiji lambarka sirta ah the taabashaduna aniga ima shaqeyso.
Ku jawaab Aduranmontana
kurai kulul dijo
Waxay igu dhacday si isku mid ah !!!!!! Ma hagaajin kartaa? T____T
Ku jawaab kurai kulul
Isla waxbaa igu dhacay wn .. wali ma aysan hagaajinin ???
John Eduardo Carranza Pacheco dijo
sida ay u hagaajiyeen cadaabta: '(taydu waa samsum galaxy S i9000
Jawaab Jhon Eduardo Carranza Pacheco
Su'aal, Sideen uga shaqeeyaa shabakadda xogta inay shaqeyso? Waan wanaajiyaa mana muuqato ... Marnaba uma baahnin baahi loo qabo in aan wax ka beddelo APN maxaa yeelay isla aaladdaas ayaa si otomaatig ah isugu xirtay shabakadda xogta, haddii aan ku daro APN waxay i weydiineysaa faahfaahin aan fikrad ka qabin, ma jiri doonto si uun Si kastaba ha noqotee, qolkeygu waa bilaash…
Ku jawaab DiegoD
Wac shirkaddaada oo weydii macluumaadka saxda ah, wax dhibaato ah kuma siin doonaan.
Waxwalba waan qabtay hadana taabashadu aniga iima shaqeyso .. (shaashadda taabashada) markaan furo si aan uhabeeyo waxba uma qaban karo wax aan sameeyo.
Muxuu yahay nooca terminalkaaga '
Lyzeth Linares Sandoval dijo
Felipe waxaan marayay kiiskaaga, shaashadeyda waa dhimatay maxaa yeelay way daartay laakin ma aysan shaqeynin taabashada laakiin si cajiiba ayaan u helay fiidiyowgaan waana xalka !!
Jawaab Lyzeth Linares Sandoval
Adonay 28 dijo
wuxuu u shaqeeyaa i9000T ??
Dayaanna _ dijo
Aad baad u mahadsantahay runtii.
Xalay mobilkeyga waxaa lagu xannibay shaashadda guriga, wax lacag ah ma uusan qaadin ama waxba. Xitaa ma aysan galin habka soo kabashada, laakiin waxay ku sameysay soo dejinta.
Waxaan ku raacay raadadkaaga adna waad ku mahadsan tahay Mobile-kayga ayaa dib loo soo nooleeyay.
Ku jawaab Sampl3_
Waad salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii romkaanku yahay mid loo adeegsan karo galaxy s GT-I9000t
Jawaab Juan Carlos Rosales Guevara
Saaxiib maya romkaankan waxaa loogu talagalay i9000
Mahadsanid Saaxiib, miyaad kugula talin kartaa rom kasta qolkayga. tan iyo markii aan u baahdo inaan cusbooneysiiyo waxaan heystaa wax ku saabsan. froyo 2.1.1.
Raadi Kooxda RemICS-UX ee ku taal baloogga
hello sxb ma ogtahay meesha aan ka heli karo ICS rom-kayga gt-i9000t tan iyo inta aad cadeyso inaysan u aheyn qalabkan… mahadsanid!
Juan Carlos Rosales sawirka meeleynta dijo
Waad salaaman tahay saaxiib wanaagsan, waxaan kuu sheegay in aan qatar galiyay oo aan romka rakibay inkasta oo aad ii sheegtay in loogu talagalay GT-i9000 laakiin xitaa sidaas ayaan ku rakibey oo romka ayaa aniga iiga shaqeeya Gt-i900t-ka, si caadi ah ayuu u shaqeeyaa.
Jawaab Juan Carlos Rosales
Waan ku faraxsanahay inay adiga kuu shaqeyneyso, laakiin wax waliba waa caadi?
U dir Samsung Mobile
Disqus ayaa qoray:
Juan Carlos Rosales (oo aan diiwaangashanayn) ayaa qoray, isagoo ka jawaabaya FranciscoRuizAntequera:
Isku xidhka faallooyinka
cinwaanka IP: 186.32.65.141
Ma aqaano waxa aan khalad sameynayo, laakiin waxaan raacay tillaabooyinka warqadda iyo markii cusboonaysiinta ay ka bilaabato ODIN waxay ku laalaysaa "boot.bin". Khadka buluuga ah ee horumarkayga kama badna waxa noqonaya 2%. Waxaan isku dayay markale iyo si lamid ah. Maxaan sameyn karaa si aan u soo ceshado ??
Waxaan kaliya isku dayay inaan ku rakibo galaxy S gt-i9003 wuuna dhintay
Waa inaan isticmaalo dammaanadda oo aan idhaahdaa weligay ma taaban, laakiin haye
Waxaan horeyba u soo maray in rom kasta uusan shaqeyneyn xitaa hadii uu yahay galaxy S
Si cad u sheeg in loogu talagalay GT-i9000, hubi haddii aad marin u leedahay qaabka soo dejinta oo weli waad badbaadin kartaa.
Ma haysto marin, gebi ahaanba wuu dhintay ...
Saaxiibku wuxuu raacay tillaabooyinka oo dhan markaan isticmaalo dhowr codsi oo aan aado shaashadda weyn wuxuu ku sii jiraa wareegga shaashadda oo madoobaatay isla markaana warqadda xardhaanshuhu mar kale soo baxayaan sidaa darteedna aan la cayimin xalku muxuu noqonayaa?
Silvina Garrido dijo
Waan raacay talaabooyinka oo dhan markaan OPIN ku siiyo waxaan ku siinayaa Start waxay i tusaysaa fariin daaqado ah (iskutallaab cas) oo tusaysa jidka iyo faylka CODE iyo badhanka OK. Haddii aan siiyo si ay u aqbasho… waxay sii ahaaneysaa sidii ay u shaqeynaysay sanduuqa farriinta ee 'ODIN' ayayna ku tusaysaa Fadlan sug…. Waxaan sugay in kabadan 20 daqiiqo mana muuqato wax tilmaamaya inay wax ka shaqeynayaan ... maxaan sameeyaa ??? Haddii aanan riixin ACCEPT, waxba ma qabanayso sidoo kale ...
In kasta oo la ii soo jeediyey talooyin ah inaanan waxba taaban ... 20 daqiiqo ka dib, waxaan go aansaday inaan xidho ODIN, oo aan damiyo moobaylka ... wax walbana waa sidii hore ee aan bilaabay, waxaan ula jeedaa moobilkaygu wuu shaqeeyaa waana taas laakiin marna arag in ay cusbooneysiisay qalabka. Moobiilkeygu waa Galaxy S I9000
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto… ..
Ku jawaab silvina garrido
Moobilka ma ku dhejisaa qaabka Download?
Navarrogarca Jason 71 dijo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii Samsung ay leedahay cod akhriye sida iPhone-ka loo yaqaan (VoiceOver), codsigan waxaa loogu talagalay dadka leh aragti hoose ama maahan maadaama aan door bidnay samsung ... nc haddii codsigan iphone uu ku jiro magac kale, waad ku mahadsantahay jawaabtaada ...
Jawaab Navarrogarca Jason71
ku habboon gt-I9000t
Haddii ka dib markii la cusbooneysiiyo ilaa 2.3.6 iyo dib u soo celinta codsiyada, xididka cf la saaro, Ma xogtii aan ku lahaa mobilka ayaa lumay ka dib?
Weligay sidan oo kale uma aan samayn, laakiin aragti ahaan waa inaadan waayin wax xog ah ama codsi ah
Hadda waan sameeyay. Dhibaatooyin ayaan kala kulmay 3g, laakiin waxaan wacay shirkaddayda (Movistar, Chile) waana xaliyay. Si kastaba ha noqotee, taleefanka hadda ma heli karo shabakad Wi-Fi ah. Maxaan sameyn karaa?
Ku soo jawaab Patrizioandrez
Wax walba waa hagaagsan yihiin, mahadsanid !!!
Wax walba waa hagaagsan yihiin, mahadsanid
Ku jawaab Albfernan
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan qabaa 1 su'aal iyo 1 dhibaato, tan hore waxay tahay maxaa yeelay batteriga waa inuu ahaadaa 100% (maadaama taleefankayga gacanta sababo badan uusan ka qaadin 100% ugu badnaan wuxuu iga tagaa 90% ka dibna ma dhacdo) u maleynayaa inay tahay batteriga ama sabab.
Dhibaatada kale ayaa ah inaan kaliya isku dayay inaan arko haddii ay iskuxirantahay laakiin waxay calaamad ii tahay inaysan aqoonsanayn aaladda oo waxaan ku tijaabiyay dhowr dekedood oo aan waxba ka jirin (Waxaan haystaa wadayaasha kies-ka oo la rakibay, mar hore ayaan dhowr jeer ku xiray taas Jidka, waan dhaqaajiyaa dib-u-hagaajinta, oo waxaan xiraa wax kasta oo la xiriira kies-ka maareeyaha hawsha oo waxaan ku sameeyaa habka Download)
Waxaan qiyaasayaa inaan ka hadlayno nooca Samsung Galaxy S ee GT-I9000?
Saaxiib hubi, waa GT-I900T waxaanan heystaa qalab 2.3.3 ah oo leh 'GINGERBREAD.UMJV2' waana sababta aan u rabay inaan u cusbooneysiiyo laakiin aniga wuu ii shaqeeyaa waana sababta aan kuugu tegayo.
GT-I9000T ma ahan GT-I9000, casharkaan waxaa lagu tijaabiyay oo lagu tijaabiyay GT-I9000, marka ma garanayo waxaan kuugu sheego terminal-kaaga, waxa ugu fiican ayaa ah inaad ku istaagto sammobile oo aad soo dejiso wax walba oo aad u baahan tahay inaad iftiimiso nooca terminalkaaga.
Hagaag markaa, waad ku mahadsantahay waqtigaaga, runtii waan ku qanacsanahay.
Hadal ahaan, ereyga COM oo ay ku xigto lambar ma muuqdo marka aad ku xirto habka Download?
Maya, waan dhigay waana sida ay sheegeyso laakiin waxay calaamad ii tahay inaysan aqoonsanayn aaladda oo aysan waligeed ogaanaynin COM.
PS.- Waxaan isku dayi doonaa inaan arko waxa aan sameeyo laakiin aragtidaada hadii ay maamusho isku xirnaanta, ma waxaad u maleyneysaa inaysan dhibaato ku aheyn baytariga aan soo sheegay?
Hagaag hadaad fiiriso cinwaanka maqaalka casharkaan waxaa loogu tala galay Samsung Galaxy S maaha Samsung Galaxy ACE.
Telefoonkaagu wuxuu noqon doonaa nooca Galaxy S model GT-I9000, sax?
ayuuuuuuuuuudaaaaaaaaaaaa !! Waxaan ku rakibay noocyadan galaxy s laakiin waxaan ku rakibay galaxy s firfircoon hadana ma isoo gelin karo qaabka dowload maadaama aysan isku mid aheyn… Waxaan ubaahanahay inaan kusoo celiyo qaabkii asalka ahaa ee galaxy s firfircoon…. Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto 🙂
Axelflorido 38 dijo
taleefanka gacantu ma daaran marinkii ugu horreeyay kadib ... wuu dhintay! Maxaan sameeyaa nin!
Waxaan tan ku sameeyay i9003 anigoo aaminsanahay inay u ahayd qalabkan, waxaan ula jeedaa, samsung galaxy scl oo aniga ima bilaabayo ama ma galayo qaabka soo dejinta !!! Maxaan sameyn karaa !? waa deg deg fadlan
Isla waxbaa igu dhacay aniga, cinwaanka qoraalkani ma cadda, waad khaldami kartaa khaladaadkaas, maadaama aan dhowaan iibsaday taleefanka gacanta, wali wuxuu haystaa damaanad, markaa waxaan u qaatay adeegga farsamada markii aan ogaaday waxay ahayd wareeg gaabis macquul ah, waxay u beddeleen mid cusub.
Hagaag, nacas adiga, waa inaad wax aqriso, ma ogeyd?
Dadka aan faaliyaha u sheegan sida aniga oo kale: Ma aanan fahmin meesha la dhigo feyl kasta, sida csc, modem, iwm. Waana sababta oo ah feylku xitaa kuma jiro iyaga, waxay leedahay oo keliya fayl .tar ah oo ay tahay in loo dhigo sidii ay dhammaantoodba ahaayeen PDA, bilow bilow waana taas. Waxaan rajeynayaa inay caawiso qof, maadaama in yar oo guuleysata ay taageeraan kuwa shakiga qaba. 🙂
Ku jawaab Jobangbang
Laakiin maxaad ii sheegeysaa, casharku waa mid faahfaahsan oo talaabo talaabo ah waxaana ku dhexjira feylka la cadaadiyey dhamaan feylasha aan ku cadeeyo casharka.
Markay ahayd 10/08/2012 23:06 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Joseman 160 dijo
Waad salaaman tahay waxaan leeyahay galay s s i9000 2.3.6 oo ka socda movistar waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan si toos ah ugu rakibi karo cf-root JVU kernel iyada iyo haddii ay taageerto nooca baseband-ka ee I9000BGJV2, nooca Kernel 2.6.35.7-I9000BGJV6-CL783990 xididka @ DELL132 # 2 mise waa inaan ku rakibaa 2.3.6 JVU firmware marka hore?
Galab wanaagsan waxaan ubaahanahay caawimaad…. Hagaag, waxaan raacay dhamaan tillaabooyinka warqadda, taleefankayguna wuxuu ku xiraa odin, daaqadda afargeeslaha ah waxay u muuqataa midab huruud leh oo lambar ku xigta ah, waxaan dhagsiiyey badhanka xiddigta hawshana way bilaabmaysaa, laakiin waxay sii socotaa oo keliya haddii ugu yaraan 2 % odin ahaan iyo taleefoon ahaanba ... dusha daaqada hurdiga ah ee fagaaraha weyn waxaa ka muuqda xarfaha FACTORYFS ,,, ilaa 15 daqiiqo kadib horumar dheeri ah malahan ... maxaa xal u noqon lahaa dhibaatadeyda ???? WAAD KU MAHADSAN TAHAY V. CAAWIMAADKAAGA IT.
Lagu daray !!
Gali CS-ta MD5 ..
Hubi MD5 .. Ha ka furin fiilada ..
CODE_I9000XXJVU_CL851880_REV03_user_low_ship.tar.md5 waa ansax.
MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 waa ansax.
Odin v.3 matoor (ID: 5) ..
Ma furi karo dekedda taxanaha ah (COM).
Dhammaan dunta ayaa la dhammaystiray (guuleysto 0 / guuldareystay 1)
Waa maxay dhibaatada ?? : S
Soo dejiso nooc hore oo odin ah
Noocii hore ee ODIN miyay ku caawisay? Isla waxbaa igu dhaca aniga mana garanayo waxaan sameeyo? sidee ku xalisay?
Ku jawaab Rod
Mar labaad mari nidaamka, adoo ka taxaddaraya meesha aad dhigeyso faylasha. Iyo calaamadeynta dib-u-soo-celinta marka hore iyo ka dib markaad geliso cfroot-ka calaamadda
Waan helay tan
Dhammaan dunta ayaa la dhammaystiray (guuleysto 0 / guuldareystay 0)
Ma dhamaatay awalba ??? okay? .. wax ii sheeg markaad awoodo
Waa hagaagsan tahay !!! dhib malahan.
Aad baad u mahadsan tahay waxaad tihiin xidigo kooban !!
Ku jawaab Pak
Marka horeba, aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadka iyo shaqada qorista ee server-yada wali shaqeynaya. Waan kuu sheegi doonaa, waxaan isku dayay inaan tan ku sameeyo taleefankayga gacanta 5 saacadood ka hor, waan dhintay, waxaan sameeyay khalkhal, waan soo noolaaday ... waan dhintay oo tanna, tallaabo tallaabo ayaan dib u soo nooleeyay ... run ahaantii , wuxuu noqday zombie ... aad xamuul buu u dhaqso badan yahay, waxay umuuqataa xorriyad dheeri ah maxaa yeelay shaashada guriga bixiyaha midkoodna ma soo baxo oo wuxuu dhahaa I900, aad buu u dhaqso badan yahay… dhibaatada? Shaashadda taabashadu aniga iima shaqeyso T_T ma aqoonsana farahayga kaliya badhannada aan u adeegayn in loo qaabeeyo 8 laba jibbaaran ma dhahayo, geli kumbuyuutarka sim check, iwm)
Waxba kamaan fahmin haddii ay jirto qaab fudud oo ii sheegi kara fadlan; _ (
Ku jawaab vvvv
Saaxiib, ma ii sheegi kartaa baasku waa maxay.
Marka dhammaan tallaabooyinka la dhammeeyo, waxay i weydiineysaa inaan "xaqiijiyo lambarka sirta ah".
Ma i caawin kartaa, mahadsanid
Ku jawaab Palamago
Kuuma weydiinayo wax baasaboor ah, taleefanku ma xirnaa?
Joc Mena dijo
Si fiican ayaan u shaqeeyey aniga, wax walba way fiicnaayeen, waad ku mahadsan tahay boostada
Jawaab ku sii Joc Mena
Fuck taxaddar sidaad u geli karto aalado 500 oo lerus ah sida sambung galaxy 3, xitaa aniga iguma soo dhacdo
Waad salaaman tihiin, wax walboo waa kuwo aad u fiican, taleefanku si la yaab leh ayuu u shaqeeyaa laakiin ma qaadanayo 3g, horeyba waan uga soo hagaajiyay apn waxaanan u badalay kooxdii xogta ee tii shirkadaydii.
Ku dhaqaaji habka duulimaadka ka dibna barkinta, iyada oo tan waa inaad heshaa ishaar.
Aad baad ugu mahadsantahay casharka, si fiican buu iigu shaqeeyey. Markii hore waxaan isku dayay inaan si toos ah u rakibo cfroot-ka maxaa yeelay waxaan horey uheystay 2.3.6 oo taleefankaygiina waa dhintay ... aad iyo aad 🙂
Aaway feylkii xididka CF ee aan soo dajiyay barnaamijka aan moodayay inuu ku xirnaa xididka CF oo aanan helin wax caawimaad ah fadlan… ¿?
Fiiri dhamaadka boostada, waxaa jira xiriiriyeyaal dhammaan barnaamijyada iyo feylasha loo baahan yahay, iyo inta barashada lagu jiro sidoo kale waxaa ku jira dhowr jeer. Waxaan kugula talinayaa inaad ereyga u aqriso ereyga waxbarid ah in wax walboo sifiican loo sharaxay adiguna aadan halista ujirin inaad uxakamayso sidii aan sameeyay bilowgii
Duduastin Tv dijo
WAA SALAAMAY HEY WAAN KALA QAADAY CULIMAHAYGA OO HADA MA SOO JEEDO AAAAAAAAAAAAAAAAH FADLAN II SHEEG WAXA AAN SAMEEYO
Jawaab Duduaustin Tv
galka ku jira xididka CF ...?
Way igu dhacday sida ay hoos ku yiraahdaan, sidoo kale waxay i weydiineysaa inaan xaqiijiyo lambarka sirta ah, haa, waan xirxiray maxaa yeelay waxaan u maleynayay in la xaday oo shirkaddu waxay u xirtay IMEI, laakiin waxaan helay maalmo ka hor iyo Intii ay furayeen waxaan ka fikiray cusbooneysiintiisa laakiin waxay i weydiineysaa baasaboorka, haddii wax waliba si fiican u socdaan Isniinta ama Talaadada waan furayaa maadaama ay ii sheegeen in furitaankeeda ay qaadanayso 72 saacadood, waan damin karaa markii la furo waxaan dhigi karaa xididka cf iyo ics? Waad ku mahadsan tahay horay, marka laga reebo dhibaatadan, wax kasta oo kale waa hagaagsan yihiin.
Andres-medina 3550 dijo
PC-kaygu ma aqoonsana aaladda qaabka soo dejinta, maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Andres-medina 3550
Hubi haddii aad fureyso odin-ka inaad hesho ereyga COM oo ay ku xigto lambar ku yaal geeska bidix ee kore.
Markay ahayd 05/09/2012 04:51 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Sisco 670 dijo
Furaha sirta ahi furaa faylasha la cadaadiyey?
hello .. dhibaato ayaan qabaa .. ma haysto wax faylal ah oo aan kala furfuro
faylka fure ee qalabka fure ee aan la furin
faylka loo yaqaan CSC
fadlan si deg deg ah ayaan ugu baahanahay
ma muuqdaan markay furayaan
Ku jawaab rakel
Mar labaad sii sifaha kala soo deg
Markay ahayd 05/09/2012 19:39 PM, «Disqus» ayaa qoray:
aakhirka ka dib seddex jeer oo laga soo degsaday zip-ka isla dhibaatadaasna fiiri bog kale oo waan xallin karaa ... waan soo dejisan karay feylasha waxaanan haystay mobilada nus-qufulka ah laakiin horay ayaa loo xalliyey iyo Rom MIUI Jelly Bean 2.8.24 by muchopoli83 oo si hufan u shaqeynaya .. aad baad ugu mahadsantahay jawaabta iyo mahadsanid inaad wada wadaagto waxan oo dhan..waxaad qabataa shaqo weyn oo sii wad ...
Waad ku mahadsan tahay saaxiibkaa amaantaada iyo taageeradaada iyo kalsoonidaada.
Markay ahayd 06/09/2012 22:54 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waxaan su'aal qabaa: Suurtagal ma tahay in hawshan IMEI la beddelay? Haddii ay dhici karto in faylkayga EFS la tirtiray oo lagu beddelay mid kale, ama wax la mid ah
Su'aasheydu waxay imaaneysaa sababtoo ah kamaan nuqulan efs (fikrad maleh inay aheed ilaa aan wax yar is ogeysiiyo) kahor aqrinta casharka, hada moobilku waa hagaagsan yahay laakiin wuxuu ii calaamadeynayaa sidii inaan wareegayo oo kale, sida inuusan banaanka u bixin dalkayga, oo waxaan ku ogaaday kies in shirkadda aan hadda dhigay ay leedahay (KOR)
Suurtagal ma tahay inaan lumiyo IMEI-kayga ama wax la mid ah oo aan haysto mid guud?
mahadsanidiin kahor, aqoon badan uma lihi arrimahaan wali
Waxaan raacay dhamaan talaabooyinka ay dhigteen iyo markaan galayo ODIM3 markaan dhameeyo dhamaan erayga PASS mobiilku ma shito wuu xanniban yahay.
Maxaan sameyn karaa, ma jirto wado lagu sii shidi karo
Ku jawaab Qrkalonso
taleefankaygu waa samsung galaxy s timahaan, ii oggolaan maayo inaan ugu magac daro ossuary
Ku jawaab Youssef
Aad baad u mahadsan tahay adeer, way ila fiicnayd aniga wax walbana sifiican ayaa loo sharaxay 😉 salaan macaan!
Waan xayirayaa ka dib markaan isticmaalo Odin. "PASS" ayaa soo muuqanaya, mobiilku dib ayuu u bilaabmayaa wuxuuna bilaabayaa inuu waxyaabo rakibo, laakiin mid mid ayey ugu muuqdaan xarfaha cas ee oranaya "Mount fail" wadista E: halkaasna wey ku sii jirtaa ... maxaa dhici kara?
Taasi waa in talaabada qaar aad khalad samaysay, talaabada ugu horeysa waa inaad doorataa dib-u-qaybinta, tan labaadna, midda leh CFRoot ma ahan.
Sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo inaad galiso fayl kasta meeshiisa.
Rakibitaankani waa barnaamij rasmi ah oo loogu talagalay qaabkan (GT-9000t) ????
Hadday tahay kayd
Markay ahayd 11/09/2012 05:30 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Hello Francisco. kumbuyuutarkaygu waa galaas S. Waxaan casharka u sameeyay xarafka ... sikastaba moobilku wuxuu qaataa waqti dheer in labilaabo, in kabadan 5min wuxuu kusugan yahay gsm ... kumuu xidho internetka.
Fadlan gacan ma i siin kartaa
Waad salaaman tahay rakib wax walba, laakiin dhibaatadaydu waxay ku saabsan tahay shaashadda taabashada, waa gaabis .. way ka jawaabaysaa tan labaad iyo xoogaa wixii aan sameeyo. Xal kasta?
Waxaan sameeyay dhamaan talaabooyinka waxaanan horey uhelay SGS I9000 waxaana horey usameeyay 2.3.6 oo xidid lagu rakibay.
Dhibaatada i haysata ayaa ah in markasta oo aan waco ama la i soo waco, dhamaadka wicitaanka waxaan helayaa khaladka soo socda: "Nidaamka com.andorid.phone ayaa si lama filaan ah loo joojiyay. Fadlan iskuday markale" ka dibna ma haysto caymis dhowr ilbiriqsi. Bluetooth wuxuu i siiyaa dhibaatooyin waana mid igu adag aniga inaan awoodo inaan ku xiro qalab kale.
Cer Qué puedo hacer?
Ku jawaab Johnny
Samee dib u dejin warshad si aad u aragto haddii ay ku xallinayso
Markay ahayd 13/09/2012 22:54 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waxaan horeyba usameeyay dib udajin warshad walina waan helayaa qaladkan, waxaan dhibaato ku qabaa bluetooth-ga iyo gps-ka markuu helo satelite-ka oo isku xiro wuxuu lumiyaa astaamaha si isdaba joog ah.
Ma jiraa hagaajin ama wax lagu xalliyo dhibaatadan?
Nuriams 206 dijo
Maxaa dhacaya haddii taleefanka gacanta laga jaro? kiiskeyga waxaa looga tagay iyadoo la laalaabaneyso shaashadda madow waxaan u daayay in cabaar ah oo aan waxba ka jirin oo aan ka jaray. hada ma daarmayo maxaan sameyn karaa?
Fadlan ka jawaab maxaa yeelay qorista ka hor waxaan aqriyay faallooyinka iyo in ka badan hal. Way dhacday laakiin jawaab uma arag.
Dib ugu laabo habka soo dejinta oo ku celi hawsha laakiin hubi inaad darawallada ku rakibtay kombuyuutarkaaga
Markay ahayd 18/09/2012 13:05 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa Galaxy S I9000T?
Maya, ma shaqeyso.
Markay ahayd 20/09/2012 21:35 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Aad baad ugu mahadsantahay sharaxaadda. Mid ka mid ah boggaga internetka ee waxyaabaha si cad loogu sharraxo.
Waxa kaliya ee aan 2 daqiiqadood ku qaatay meesha aan ku dhegay:
1. Ku rakibida qalabka kombiyuutarka odin kama dhamaan hawsha. Ugu dambeyntiina, anigoo ka baqaya waxa ugu xun, waxaan ka jaray taleefanka, oo waxaan isku dayay nooc kale oo odin ah, sida aad ku sharaxday faallo. Waxay ahayd mid qumman.
Marka la rakibo xididka CF waxay isku dayday inay faylka aan furayn ku dhejiso PDA, markay ahayd.
Ugu dambeyntii, guul.
Ku jawaab charli
Saaxiib aad u fiican, wax walbo waan sameeyay wax walbana way fiicnaayeen, hada waxaan furayaa wajiga unuga wuu dag daganyahay. Mahadsanid
Ku jawaab Trixher
Yorch Jape dijo
hello su'aal aan weyddiin karo hadii aan kujiro qaabka dajinta taleefanka gacanta, howshu haba yaraatee wax horumar ah ma sameyso, waxay kusii jirtaa qeybta sbl.bin, muddo ayey socotaa kumana socoto, maxaan sameyn karaa samee ???
Jawaab Yorch Jape
Isku day inaad mar labaad geliso qaabka soo dejinta oo ku celi
Markay ahayd 23/09/2012 08:46 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waad salaaman tahay, maalin wanaagsan ama subax wanaagsan, waxaad badbaadisay naftayda laakiin taasi waa sababta aad u soo rartay taleefankayga gacanta, waxaan u maleynayay inuu dhintay, qof ayaa doonayay inuu soo dhigo isla boostadaada laakiin adiga oo aan lahayn csc oo ay lahaayeen lambar taleefan oo aad u xun Labadaas codsi ee ii muuqday ka dib markii aan sameeyay talaabadii ugu dambeysay sida cfroot? Oo sideen ku helaa taleefankayga si aan u qabsado 3g, internetku igama qabto, waxaan ka imid Venezuela waxaanan leeyahay dijitaal
Jawaab Arturo Camejo
Gali xiriiryada wireless-ka ah oo aad jaangooyo apnka, haddii aadan aqoon xogta, shirkaddaada ayaa ku siin doonta
Markay ahayd 29/09/2012 11:09 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Julian Steinburg dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii casharradan ay si siman ugu shaqeynayaan Samsung Galaxy S Pus. GT-I9001
Jawaab Julian Steinburg
Maya ma shaqeyso
ha rakibin, waxaan ku sameeyay samsung galaxy gt-i9000 mana daarna !!!!
Kahor cusbooneysiinta, waxaan aqriyay faallooyinka badankoodna waxay kahadleen kutaan badan. Marka waxaan kuugu soo qorayaa MAHADSANID sida wanaagsan ee wax walboo loo sharaxay ay tahay, iyo inaan u cusbooneysiiyay dhib la'aan laakiin xoogaa neerfayaal ah maxaa yeelay waxay ahayd markii ugu horreysay ee mobilkaan. Kuwa shakiga qaba, waa wax aad loogu kalsoonaan karo oo haddii aad raacdo tilmaamaha TALLAABADA TALLAABADA oo si fiican u shaqeynaya. Mar labaad mahadsanid.
Francisco wax ku biirinta ugu fiican, u qaado nidaamka sida aad u muujisay oo kaamil ah. Aad baad ugu mahadsantahay casharkaaga sida fudud, fudud oo wax ku ool ah.
Xal sii walaal, taleefankayga gacanta sidan kuma jebin kartid!
Miyaanad badali karin magaca boostada adoo dhahaya muunad noocee ah ayaa loogu talagalay?
PS: hada waxaan haystaa miisaan culus oo 2000 Pesos Argentine ah
Taleefanka gacanta, sidaad u sheegtay, adigu kaligaa ayaad jabisay, haddii aad aqriso boostada waad ogaan doontaa nooca terminal-keedu uu si gaar ah u yahay, laakiin dabcan taas waa inaad wax walba akhrisataa.
Sidee u fududahay inaad ku eedeyso dadka kale qaladaadkaaga Markaan sidaas iri iyo si aad u aragto dardaarankeyga wanaagsan, haddii aad ii sheegto nooca gaarka ah ee terminaalka aad leedahay, waan arki doonaa waxa la qaban karo.
Waad salaaman tahay, qof ayaa garanaya sida loo helo feylka 'Firmeware' markii la soo dajinayo wuxuu la mid yahay CFRoot, oo haddii aad hoos u dhigto waxay soo saartaa feyl oranaya zImage. yaa i caawin kara?
Ku jawaab Antonio Jimenez
xal ma u heshay tan ??? Waan isku dayayaa laakiin ma aqaano sida loo saxo.
Waxay igu dhacdaa si isku mid ah. Faylka CFRoot iyo Firmware waa isku mid. Haddii qofkasta soo rogi karo Firmware sax ah ama abuuraha boostada waan ku qanacsanahay.
Salaan kadib, dhibaato ayaan qabaa, waxaan cusbooneysiiyay ilaa 2.3.6 qiyaastii 4 bilood ka hor, marka hada u bood talaabada tooska ah ee loo dhigayo CFROOT si loo dhigo 4.1.4, dhibaatadu waxay tahay inuu ku sii jiro shaashadda guriga, midka dhahayo samsung i9000, daaran, damiyaa, iyo wixii la mid ah. Miyaad i caawin kartaa? Mahadsanid.
Ku jawaab Dav_gerrero
Galab wanaagsan, horey ayaan u sameeyay tillaabooyinka si aan u dhigo nooca xxjvu, kaliya in xididku uusan sameyn karin, waxaan sameeyaa seddexda badhan oo waxay ku soo baxdaa habka soo kabashada 3 iyo sidee ugu laaban karaa qaabka soo dejinta
Ku jawaab Mediblast
wuxuu la shaqeeyaa gt-i9000b
Majiro nin, tan waxaa loogu talagalay GT-I900 oo keliya.
Jdramirez 251985 dijo
Qalabkani miyuu la shaqeeyaa 9000t? sida xididka?
Jawaab Jdramirez 251985
Maya, waxaa loogu talagalay I9000
Waa salaaman tahay, qoraal aad u wanaagsan !! Waxay u shaqeysaa sifiican !! Waan sameeyay laakiin hadda waxaan doonayaa inaan joojiyo xididnimada oo ka tago taleefanka sidii uu ahaa nooca 2.3.3 ee yoigo. iyo haddii ay suurtagal tahay in meesha laga saaro miisaanka SAT. SIDEE KU SAMEEYAA ???
Uma baahnid taas si aad ugu dirto SAT, haddii aad mar labaad iftiimiso nooca 2.3.6 JVU ka dibna aadan sameyn qaybta CFRoot, waxay diyaar u noqon doontaa inay u keento SAT.
Noocaas ayaa si fiican looga cusbooneysiin karaa Kies.
Hubso inaad ku sameysid masax buste dhammaan sdcard gudaha ah.
Marka sidee baan u sameeyaa ... sidii aan u sameeyay inaan u dhigo nooca 2.3.6 laakiin aniga oo aan samayn CFRoot? Xoogaa waan lumay ..
Dhab ahaan, laakiin sidoo kale waxay nadiifisaa xasuusta gudaha ee qalabka
Maxy romero dijo
Waxaan rakibay wax walba sida ay ku qoran tahay Boostada, sifiican ayeyna aniga ila shaqeysaa, ka dib waxaan u qaabeeyaa APNs sida uu sheegayo hawl wadeenkeyga maxaliga ah ee Orang Israel, wax walbana si wanaagsan ayey u socdeen.
Aad baad ugu mahadsantahay, gaar ahaan sida hufan ee wax walboo loo sharaxay, waxay muujineysaa inaad waqti gelisay sameynta.
Aad baad u mahadsantahay !!!!!!
Jawaab Maxy Romero
Dardero 50 dijo
Aad baad ugu mahadsan tahay wax ku biirintaada, wax walba aniga ayey igu fiicnaayeen. Hadda sideen u rakibaa jalaatada?
Ku jawaab Dardero50
Ka raadi baloogga Tsunami X2.5 oo ah Jelly Bean Android 4.1.2. Waqtigan xaadirka ah waa roomaanta ugu fiican xilligan.
silocommo la aqoonsan karo dijo
Mahad badan. Ma aanan dooneynin inaan badalo moobilkeyga maxaa yeelay waa cusbaa oo horey ayaan u haystay xilli kale. Hambalyo !!!
Ku jawaab silollegoasaberantes
Hadda ku iftiimiya romanka Tsunami X2.5 waxaadna heleysaa nooca ugu dambeeya ee Android oo leh muuqaal muuqaal iyo shaqeynaya.
Ma aqaano waxa fashilmay laakiin markii aan howsha oo dhan qabtay waxaan isku dayaa inaan taleefanka shido oo kaliya waxaa ii soo dhacaya fariin cagaaran ('logo. Jpg' draw failed), maxaan sameyn karaa si aan u saxo?
Maxaad leedahay terminal?
Xagee kahelayaa modemka feylka iyo csc maheli karo.
Iddo Jose Claros dijo
sifiican ... Waxaan hayaa wax aan weyddiiyo ... gebi ahaanba waxaan qaaday talaabooyinka halkaan lagu soo bandhigay, (moobilkeygu waa Galaxy S i9000) iyo markaan ku xirmayo Wi-Fi, waxaa jira cayayaan aad dhif u ah oo ah wuxuu dib u bilaabayaa isku xirnaanta daqiiqad kasta ... taasi waa, waxay ka goysaa wifi oo dib ayey uheshay ... waa wax dhib ah maxaa yeelay mararka qaar waxaan soo degsadaa app waana gooyaa ... Waa inaan dib u bilaabaa soo dejinta ... iyo xitaa kuma dhaho fiidiyowga YouTube-ka ama wax la mid ah ... waan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ay noqon karto? ... haddii qof garanayo sida loo xalliyo ... horay, waad ku mahadsan tahay!
Jawaab Iddo José Claros
Waad ku mahadsantahay casharkaaga. Waxaan awooday inaan soo nooleeyo firfircoonidaydii ka dib leben nasiib daro ah.
Ku jawaab Albercruz
Ma buuxin karo feylka aan furayn ee CF Root (zImage), qeybta PDA, maxaa yeelay maheli karo in kastoo uu kujiro galka.
Waa inaad dhigataa nooc ka mid ah kordhin ama wax.
Aad u fiican! Waxaan u sameeyay wax walba sidii casharka oo horeyna waan u cusbooneysiiyay i9000
Ma jirto waddo aad kala soo degsan kartid barnaamijka ama cfroot-ka bogga 4shared, haddii qof i caawin karo …….
Ku jawaab vitin
cf-xididku wuxuu u shaqeeyaa gt-i9000b
oo wax walba ku rakibay warqadda, markii dib loo bilaabayay, shaashadda ayaa madoobaatay, hadda ma daarmayo, waxaan haystaa galaxy s i9000….
xal kasta? : /
Ku celceli hawsha oo ka taxaddar inaad wax walba u sameyso sida tababarka, gaar ahaan arrinta dib-u-iibinta.
FANTASTIC, aad baad u mahadsan tahay, rakibay adigoo raacaya tilmaamaha si taxaddar leh, iyo terminaalku si buuxda ayuu u shaqeeyaa oo u fiican yahay.
Cajiib, qumman, waan sameeyay markii ugu horaysay wax walbana way noqdeen sidaad uhadashay, aad baan kaaga mahadcelinaynaa tabarucaadaada, waad sii waddaa inaad sameyso, waxaad horeyba u laheyd qof raacsan.
Galab wanaagsan dhibaato ayaa i haysa waxaan sameeyay wixii casharku yidhi laakiin waxa dhacaya ayaa ah waxaan haystaa kiniin galaxy s Model yp-g70 oo markaan dhammeeyo hawsha halkii aan dib u bilaabi lahaa waxay ku sii jiri doontaa shaashad madow oo leh astaanta samsung, ma caawin kartaa aad ayaan u xalliyaa taas
Fiiri, waa inaad mar labaad isku daydaa oo markan dib u dhigtaa 2.3.6 re partition in odin oo sug inyar ha ka jarin galaxy s ilaa ay daarto qaabka dowload oo ay ku weydiinayso luqadda waadna iska jari kartaa
Waad salaaman tihiin, waxaan kujiraa rakibida laakiin waxay durba qaadataa in kabadan 10 daqiiqo wax walbana sbl wey kusocdaan odin mana hormariyo amarka ugu dambeeya wuxuu dhahaa sbl.bin pro ma hormariyo wax walbana waan sameeyay sida buuga tilmaamayo waxaan leeyahay Xaqiijiyay tillaabooyinka haddana ma sii hormarinayo taleefanka waa samsung galaxy gt i9000t ma i caawin kartaa mise waxaad dhahdaa km kitar tan oo aad ku sii wadi kartaa taleefankayga caadiga ah ya ke ya panikie me
Tani looguma talagalin GT-I9000T laakiin waa mid loogu talagalay GT-I9000
Crixuz gore dijo
Marka loo eego firmware wixii aan akhriyay, ma jirin kala duwanaansho u dhexeeya moodooyinka i9000t iyo i9000 oo qalabkaas waa la cusbooneysiin karaa. Marka taasi waa halka aan ku qaldanahay? Ma ogtahay halka aan ka heli karo farriinteyda xk asalka ah isla markaana taleefankayga gacanta uu dhintay
Ku jawaab Crixuz Gore
Waa salaaman tahay Francisco Ruiz… Waxaan raacay btal casharka kaas oo sidaad ku sifeysay laakiin waxaan leeyahay dhibaato la mid ah tan xpressa t… ma dhaafto sbl… kooxdeydu waa GT I9000… Aad baan u jeclaan lahaa haddii aad i hagi lahayd xoogaa xal ama badal ah… Waad ku mahadsantahay…! !!
Aad baad u mahadsan tahay, waxaad raacday warqadda dhib la'aan, adoo dhahaya bilowgii odin wuu fashilmay, laakiin aakhirkii wuu helay. Mar labaad mahadsanid.
Ku jawaab Etonet
Sida xariir raacaya casharka. Dhibaatooyin ayaan kala kulmay cusbooneysiinta Rom Manager si toos ah Froyo ugu yaraanna waan ku guuleystey inaan u geeyo Gingerbread hadda 🙂
norman i9000t dijo
Su'aashaydu waxay tahay i9000t waxay khusaysaa tan iyo markii aan howsha qabanayo, khadka hurdiga ayaa xoogaa soo kordha waxyar kadibna talobixinta qaar dib ayaa loo bilaabayaa
Jawaab norman i9000t
Javier Alive dijo
Waa salaaman tahay Francisco, waxaan haystaa GT-I9000, waxaan raacay tillaabooyinka, laakiin waxa ugu horreeya ee layaabka leh ee aan arkay waxay ahayd markii aan taleefanka ku xirayo PC-ga markii ugu horreysay qaabka donwload, halkii 1 COM aan ka heli lahaa 3 Coms. Waxaan siiyay BILAASH iyo in kabadan 10 daqiiqo COM 0 wali way banaanayd, COM1 iyo COM2na waxay bixiyeen FASHIL, halkaasna way joogaan, maxaan sameeyaa? Kuma dhiiran karo inaan taleefanka kajaro PC-ga, waxaan sugayaa adaa jawaabaya
Jawaab Javier Vivo
Kuwani waa khadadka ugu dambeeya ee ka muuqda daaqadda
Odin v.3 matoor (ID: 15) ..
Odin v.3 matoor (ID: 9) ..
Odin v.3 matoor (ID: 8) ..
Waa inaad rakibtaa darawallada oo aad ku xirtaa mobilka qaabka soo dejinta.
Markay ahayd 21/12/2012 01:28 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waan xaliyay, anigoo adeegsanaya odin .83 halkii aan ka isticmaali lahaa .82, hada waxaan rakibayaa jelly bean 4.1.1 rom, feylasha waan ka soo dagsaday taleefanka wuuna rakibanayaa, laakiin waxay umuuqataa inay waqti dheer qaadaneyso, miyaanay ahayn Waxaan hayaa gargoyle muddo dheer shaashadda ...
Wax walba si fiican ayey iigu shaqeeyeen, aad baad u mahadsan tahay!
wuxuu u shaqeeyaa samsung GT-I9000b
Francisco: mar hadaan hawlgalo Nexus 4, waxaan qaatay Galaxy S oo aan ku dhiiraday inaan xidido…. tilmaamahaaga MA AH FASHIL iyo dhammaantood 15 daqiiqo.
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida aqoontaada.
Hadda waxaan rabaa in aan rakibo nooca sinjibiisha ah, haddii ay suurogal tahay 4.2.1 si aan u barbar dhigo Nexus ... oo runtii waxaan u leeyahay nacayb wixii aan loo baahnayn ku qaatay ...
Wax talo ah oo ku saabsan talaabadan cusub?
Ku jawaab picudu
Raac casharka si aad u rakibto RemICS-JB V1.0
8 Janaayo 2013 17:22 pm, Disqus wuxuu qoray:
rakibay oo si sax ah u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantahay…. tilmaamahaagu waa sax.
Maalin tijaabo ka dib, runtii uma baahnin inaan iibsado nexus4, galakiska wuxuu u shaqeeyaa si isku mid ah …………… haddii aad Oviedo timaaddo, i sii taabasho, waxaan kugu leeyahay qaar khamri ah.
Mahadsanid sxb maskaxda ayaan ku hayn doonaa
Markay ahayd 09/01/2013 18:55 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waad salaaman tihiin. Waad ii sheegi kartaa haddii tani ay tahay waxa saxda ah in la sameeyo, maxaa yeelay ma helo kaarka. Mahadsanid
Nabade Francisco, waxaan raacay casharka tallaabo-tallaabo markii aan dib u bilaabo taleefanka wuxuu i weydiiyaa lambar sir ah, sidee baan ku xalliyaa tan. Mahadsanid
Tami Esp Faafi dijo
Waad ku mahadsantahay waxaan dib u helay I9000-kayga, anigoo raacaya tilmaamahaaga !!!
Jawaab ku sii faafi Tami Esp
dhac 14 dijo
Aad baad u mahadsantahay saaxiib, wax walboo sifiican ayey u shaqeeyaan !!! Markaad u dhaadhacdo Andalusia waxaad haysataa casuumaad. Habsiin
Jawaab khamiis 14
Mahadsanid saaxiib, waad ogtahay halkan inaad noo hayso wixii su'aalo ah.
sidoo kale waxaan sidoo kale ku sameeyay warqadda imikana maheli karo wax caynsi ah oo shabakad ah. terminaalku wuxuu ahaa vodafon waxaana sii daayay IMEI tani waxay yeelan doontaa wax ay ku sameyso. Waad ku mahadsantahay horay
Waa inaad ku dhejisid APNs-ka xogta shirkaddaada.
Tani waxaad ka heli doontaa isku xirnaanta wireless iyo shabakadaha. Xogta waxaa laga heli karaa internetka ama wacaya Vodafone.
Markay ahayd 12/02/2013 02:00 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Haye, waxaan hayaa galaxy si 9000 waxaanan u cusbooneysiiyaa nooca firmware 2.3.6 Gingerbread, su'aashaydu waxay tahay hadii uu jiro nooc kafiican taleefankan
Jawaab Fco. Javier
Serch martinez dijo
maqal su'aal sideed u cusbooneysiisay sida halkan ku qoran?
oo fiiri, waxaan helay midkan ay yiraahdaan kan ugu fiican
Ku jawaab Serch Martinez
Baarka buluuga ah ee qaabka soo dejintu isma beddelo, ma qaadataa waqti dheer? Waxay iga caawineysaa inaanan ogeyn haddii aan ka furo oo aan ku tijaabiyo kombiyuutar kale ama waxa la sameeyo, wax walba ayaan ku sameeyay warqadda
Manme Malaga dijo
Mahadsanid!! Waxaan dib u helay taleefankayga gacanta oo nafisey
Jawaab ku sii Manme Málaga
olle wuxuu kujiraa sbl.bin saaxiib mana aqaano waxaan sameeyo fadlan jawaab
Waa inaan aad ugu mahadnaqaa maqaalkan maxaa yeelay waxaad ka badbaadisay galaxykeyga inuu noqdo leben tan iyo markii aan isku dayay inaan ka xidido dhinaca kale mar walbana way i soo cusbooneysiineysay imikana waxay noqotay sidii wax cusub.
Aad baad ugu mahadsantahay iskaashigaaga boggan
Waxaan hayaa samsung i9000b, ma ogtahay inay tani sidoo kale shaqayso? Waxaa jira waxyaabo aad u yar oo loogu talagalay Celu-kan… Mahadsanidin !!! wax walboo ka caawiya isku darka !!!!
Waxaan raacay tillaabooyinka sida ku xusan boostada laakiin markaan dib u bilaabo taleefankayga wuxuu ku sii jeedaa shaashadda shaashadda kumbuyuutarka On-screen ee i weydiinaya inaan taabto goob qoraal ah oo aanu ka sii socon halkaas, sida muuqata shaashadda taabashadu way joogsatay shaqadeeda Ma aqbalayo taabashada shaashadda ...
Maxaan sameyn karaa
Waa maxay nooca saxda ah ee terminal-kaaga?
Waa nooca GT-I9000B
Iima oggolaaneyso inaan wax ku sameeyo shaashadda waxaana soo baxaya batoon xigta oo aanan riixi karin maxaa yeelay shaashadda kama jawaabeyso ...
Maxaad ii soo jeedineysaa inaan sameeyo?
Tag sammobile.com oo soo dejiso qalab ku habboon moodeelkaaga maaddaama casharradan loogu talagalay GT-I9000.
Ok Francisco, aad baad u mahadsan tahay…. Waxaan ka soo dejinayaa qalab ku habboon oo ku habboon goobta.
Waad ku mahadsan tahay saaxiibkaa inaad na aaminto
Ivan E. dijo
Halyeey Carlos, ma heshay inaad ku hagaajiso shaashadda goobaha kumbuyuutarka On-screen ??? Waxaan haystaa isla 9000b moodal oo waan ku hadhay ikhtiyaarkaas ... Mise wax kale baad samaysay ??? Waad ku mahadsantahay jawaabta.
Jawaab Ivan E.
Sheygan waxaa loogu talagalay i9000 ee ma ahan i9000B
Markay ahayd 04/04/2013 04:49 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waad salaaman tahay, waxan oo dhan ayaan ka aqriyay taleefankayga waxayna i weydiinayaan lambar sir ah oo aanan xitaa ogeyn waxa uu yahay, haddii taleefanka la xirayo, xoogaa xal ah
Aniguna waan sameeyaa wax kasta oo ay tiraahdo oo hadda taleefanka ayaa weydiisanaya koodh xalka
Waxay noqon doontaa lambarka SIM, sax?
Waxaan haystaa sim-ka oo laga saaray oo exo dhamaan tillaabooyinka sida aad muujisay waana xaqiijinayaa sirta
Fadlan dib-u-rakib mar kale
Nicolas A. Ferreyra dijo
Waxaan rakibay wax walba sifiican, ma haysto suufka wax lagu qoro ama wax kale, qof ma i caawin karaa?
Jawaab Nicolás A. Ferreyra
Waa maxay nooca gaarka ah ee taleefankaagu?
Markay ahayd 04/04/2013 01:03 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waa Galaxy S GT-I9000, wax walba aniga wey i shaqeeyeen marka laga reebo shaashadda
Salaan !! Ma heli karo qalabka si aan u helo Roteado cusub, Soo-kabashada la beddelay. Waxaan haystaa Galaxy S on Android 2.3.6 Waxaan soo degsaday feylka CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS waxaanan raacayaa talaabooyinka aad tilmaamayso, wax waliba waxay umuuqdaan inay sax yihiin, laakiin markaan isku dayo inaan taleefanka mar kale furo , Kaliya waxaan helayaa shaashadda saddexagalka isku mid ah ee aan ahayn liiska leh xulashooyinka ay tahay inay soo baxaan. Maxaan khaldamayaa ???
Waxaan rajeynayaa in qof i caawin karo. Mahadsanid.
Ku jawaab oliban
Ka dhig taada mid dhammeystiran dhibna kuuma lahan doonto. Iskusoo wada duuboo, ogow in qaybta ugu dambeysa aadan haysan dib-u-qorid calaamadeysan.
Markay ahayd 06/04/2013 22:07 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waad salaaman tihiin wax walba waan u sameeyay sida casharka laakiin aniga oo aan rakibin CF-Root ma doonayo inaan rakibo maaddaama aan mobaylku xididaysan yahay. laakin marka howshu dhamaato oo taleefanka dib loo bilaabayo wuxuu i weydiiyaa koodh mana ii ogolaanayo inaan wax sameeyo .. Waxaan u baahanahay caawimaad faa !!!
Waa maxay nooca ay tahay
Bishii Abriil 12, 2013 19:26 pm, Disqus wuxuu qoray:
aad baad u mahadsantahay !! Telefoonkii ayaa iga xirmay imei mana wici kari waayey ama wici waayey ama waxaba. Waa wax cajiib ah. Kaliya adoo ku cusbooneysiinaya taleefanka odin iyo rakibida cf xididka ayaa i furay oo waxay umuuqataa mid cusub! Aad ayaad u mahadsantahay !! 🙂
Ka jawaab xabadaha
Haye, waxaan aqriyay casharka oo dhan wax walbana waan sameeyay si sax ah, laakiin markii dib loo bilaabayo dib u bilaabista, waxay i weydiineysaa lambar sir ah mana ahan
Ku jawaab leandro_perdomo
Tani waligay iguma dhicin oo waxaan iftiimiyay tiro badan oo Galaxy S.
Isla sidaas ayaa igu dhacday .. maxaa la saxay?
Waxaan ku daray dhammaan faylasha sida aad tilmaamayso laakiin waxay ku sii jirtaa xulashada ...
oo waxay qaadataa 1/2 saac sidan oo kale inaan sameeyo! 🙁 caawi plss….
MAHADSANID ! ! !
Beddel wax soo saarka USB-ga, mararka qaarkood dhibaatadu halkaas ayey taal
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, beddel terminaalka iyo xitaa kombuyuutarka, laakiin maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Zito Moreno
ma la jaan qaadi kartaa galaxy s i9003l? Waxaan durba soo dajinayaa barnaamijyada si aan u bilaabo !! aad u cabsi badan
Xitaa ha ka fikirin inaad isku daydo saaxiib ama waad xamuulikarta boosteejada
Markay ahayd 21/04/2013 18:49 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Tony oropeza dijo
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxa ugu horeeya ee aan doonayo inaan muujiyo ayaa mahad weyn u ah qoraaga casharradan, waxaan ka imid inaan ahay farsamayaqaan qalab Blackberry ah aniga ahaanna marwalba waxay ahayd mid caqli gal ah in la sameeyo casriyaynta noocan ah, si kastaba ha noqotee suuqa Venezuela wuxuu u badalayay IPhone iyo Samsung sidaa darteed waa inaan balaariyaa aragtideyda waana taas sababta aan u raadinayay casharro wax kabadan ama kayar ay i bari doonaan inaan sameeyo cusbooneysiinta sida in loo sharxay ilmo, waxaan ku helay casharkaan adoo raacaya tilmaamaha talaabo talaabo ah una muuqda hubinta qaabka GT-I9000 oo si cad loogu sharaxay bilawgii casharkaan oo aniga igu fiicnaa, taas oo aan rabo inaan ugu mahadceliyo macalinka markale sharraxaaddiisa oo faahfaahsan. Waxay u shaqeysay sidii soojiidasho ahaan inaan si sax ah u fahmo cusboonaysiinta codsi kasta. Salu2 horey ayaa lagugu xushay kuwa aan ugu jeclahay espro sii dhajinta.
Ku jawaab Tony Oropeza
Waad salaaman tihiin, marka hore waad mahadsan tihiin dhammaantiin oo aad ugu dadaala arrimaha si aan dhammaanteen ugu raaxaysanno hadhow.
Waxaan rabaa in aan cusbooneysiiyo nooca android-ka ee i9000 laakiin kahor inta aanan qaadin talaabooyinka waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aan ku sameyn karo nooca 2.2 froyo.xwJPF mise waa in aan marka hore u beddelaa nooc kale ka dibna aan raaco talaabooyinka halkan lagu sharaxay? Mobiilku wuxuu ka yimid Yoigo mana aanan taaban wax aan ku dhalo ama xidid ku yeelo
Aad ayaad u mahadsantahay horay usocodka.
Alberto Solis dijo
Waad salaaman tahay, sidee ayaan u cusbooneysiin karaa galaxy-kayga aniga oo aan ku rakibin Kernel-ka caamka ah Root iyo ClockWorkmod Recovery waana ay ii shaqeyn doontaa aniga ama waa inaan rakibo waxaan sugayaa jawaab mahadsanid
Ku jawaab alberto solis
Juan Carlos Lara dijo
Fadlan, waxaan ubaahanahay caawinaadaada. HIce wax walba illaa warqadda iyo marka taleefanka uu daaran yahay, wax walba way shaqeeyaan marka laga reebo shaashadda, ma siin karo tan xigta. Telefoonkaygu wuu xumaaday? Waa isku qaab, fadlan, waxaan u baahanahay caawimaad.
Jawaab Juan Carlos Lara
Waxaan shaki ka qabaa in tan lagu samayn karo i9000B?
Hel PIT khariidaynta.
Cusbooneysiinta qalabka firmware ayaa bilaabmaya ..
halkaa odinku wuu kujiraa mana haysto abansa, maxaan sameeyaa
Hello Francisco, waan qabtay wixii tilmaaman casharkaan waxkastana sifiican ayey udhaceen, marka laga reebo in aan lumiyey xiriirada ajandaha, anigoo aan ogeysiinin waqti kasta in nuqul ka mid ah xiriirada la sameeyo kahor intaadan bilaabin. Waxaa laga yaabaa inay fiicnaan lahayd haddii aad ku darto tilmaantaan dadka soo socda ee ku dhiiran kara inay sameeyaan.
Sikastaba, ma jirtaa wado lagu helo xiriiriyadayda?
Ku jawaab dassad
markay dib u bilaabato ayay ii sheegtaa
Waxaan ku siin karaa gargaar degdeg ah, fadlan
Sideen ku soo ceshan karaa shabakada xogta ????
Hello Francisco, marwalba waan ku raacaa. Way igu dhacdaa inaan dhibaato qabo, way igu tiirineysaa howsha koowaad, waxaan qabtay wax ka badan 15 jeer mana ii shaqeyso, maxaan sameyn karaa? Caawimaad.
Nidaamkani wuxuu qaadanayaa 51 daqiiqo, wuxuu rabay inuu igu toogto kubadaha
Carlos Alberto Esis dijo
Caawinaad, taleefanku wuu madoobaaday, ma bilaabmayo ama ma galayo dowloader ama hab soo kabasho, kama qabanayo xeedho laakiin anigu ma rakibi karo
Jawaab Carlos Alberto Esis
adeer ed dijo
Macluumaad aad u fiican walaal, waxaad keydisay walaalkay taleefankiisa haha
Ujawaab adeer ed
Francisco, galab wanaagsan, waxaan qaaday dhamaan talaabooyinka, waxaan siiyay xiddig 2 daqiiqo gudahood FASHILKA ayaa soo baxay! odin. Waxaan isku dayay inaan markale sameeyo waxayna mobilka ka muuqataa in taleefanka iyo kombuyuutarka la joojiyay. Maxaan sameyn karaa ??
isla waxbaa igu dhacay
Aad baad u mahadsan tihiin si sax ah ayaan u cusbooneysiiyay, tilmaamaha sifiican ayaa loo sharaxay, mahadsanid
MILL MAHADSANID EXELENTEEE …… WAAN U SHAQAYNAY QARANKA
Ku jawaab CAREMIERDA
Meelna kuma qorna inay tahay 9003. Haddii aadan si sax ah u akhrin, ha eedeyn kuwa kale.
Ku jawaab kal-bert
hello saaxiib, eu tenho galaxy s i9000b as faço in la rakibo ??
Jawaab ku renan
Mark Anderson dijo
Walaalayaal waad salaaman tihiin, waxaan cusbooneysiinaayay qalabka 'samsung galaxy y young', anigoo aaminsanahay in howshan aan ku guuleysan doono, sababaha X awgood, markaan ku dhawaaday inaan cusbooneysiiyo, si kadis ah ayuu u damay, maxaan ku sameyn karaa ma daaran? : S
Jawaab ku bixi Marcos Anderson
Hal su'aal, cf-rootkee ​​ayaan u isticmaalaa inaan ku xidido galaxy gt i9000 oo leh android 2.2 froyo.xwjpf? iyo gaar ahaan halkee baan ka heli karaa faylka?
Iyo qaab isku mid ah laakiin leh android 2.3.6 leh gingerbread.xwjw9?
Carlos Seville dijo
Aad baad u mahadsantahay, waxaan raacay talaabooyinka oo dhan wax dhib ahna kalama kulmin. Hal su'aal, hada waxaan helay ikhtiyaarka ah inaan dhigo oo meesha ka saaro codka meesha ka hor intaanan helin marinka degdegga ah ee ku xirnaanta internetka ... miyaa la beddeli karaa? waa wax culus inay galaan shabakadaha si ay u kiciyaan iyaga markasta.
Ku jawaab carlos sevilla
Waa salaaman tahay, waxaan ku rakibay nooca firmware 2.3.6, waa lagama maarmaan in la sameeyo dhammaan talaabooyinka la tilmaamay, ama kaliya laga helo xididka CF ???
Markaad ka bilowdo CFRoot waxaad haysataa kugu filan.
haye saaxiib, waxaan hayaa galaxy jeebka gt-s5301l android ics oo waxaan isweydiinayay hadii ay tahay isla nidaamkii lagu rakibayay qalabka taleefanka gacanta, ma isku midbaa mise maba kujiraa qaybta rakibida qalabka qalabka?
Ku jawaab gastonxD
xaydhkaygu ma doonayo inuu karsado
Ku jawaab roberrt
Wax walba waxay u shaqeeyeen si hagaagsan iyagoo raacaya tillaabooyinka.
Salaan iyo mahadsanid !.
Way shaqaysaa *
Sawirka meeleynta Markitos Lopez dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaad qoraal ku sameyso GT-i9000b… Thanks
Jawaab Markitos Lopez
Faafiye Rhider dijo
Waad ku mahadsan tahay Francisco Ruiz, talaabooyinkan waxaad ku soo nooleyn kartaa Galaxy S I9000, xididka waxaan ku sameeyaa si kale oo leh barnaamij Shiinaha ah waa mid deg deg ah oo amaan ah. Waad ku mahadsan tahay mar kale Peru.
Jawaab Rhider Rixter
Waxaan sameeyay howsha mana uheli karo inaan shido galaxy-gayga s I9000B, wax xal ah? Ma gali karo qaabka soo kabashada, laakiin markaan soo dejinayo ……
Ku jawaab abigail
Subax wanaagsan Francisco. Waxaan ku sameeyay talaabooyinka mid mid sida aad tilmaantay. Marka OK. Waxay bixisaa khaladaad isdaba joog ah (sawir ayaan hayaa laakiin ma aqaano sidaan kuugu soo diro) taleefanka gacmuhuna wuu shidaa oo si goos goos ah uga muuqdaa astaanta GALAXY S. Mararka qaarkood wuxuu si sax ah u daaraa waqti dheer kadib. sida loo xaliyo dabka iyo khaladaadka.
Ku jawaab Antonio Fernández
Waad salaaman tahay, ka waran inkasta oo qoraalkaagu duug yahay, haddana wuu faa'iido leeyahay, naga caawi adoo faylalka ku soo raraya meg ama server muddo-dheer ah. Salaan
Stephanie Goncalves dijo
Salaan! Waxaan rabaa caawimaad. Waan ka xumahay inaan ku dhibaateeyo laakiin waxaa laga yaabaa inaad i caawin karto. Telefoonkaygu waa samsgung galaxy S GT-I9000, waxaan doonayay inaan udaadiyo si ay ula adeegsato kaar kale oo SIM ah shirkad taleefan kale, waxaan bilaabay inaan xidido marka hore, waxaan raacay talaabooyinka casharkaan: http://androidadvices.com/how-to-root-galaxy-s-on-android-2-3-4-xxjvp-firmware/3/ sababta oo ah nambarkayga dhismaha wuxuu ku dhammaaday XXJVP (Ma xasuusto inta kale, waxaan u nacas ahay inaanan qorin). Aniga oo isticmaalaya feylka CF-Root-XX_JVP_AAD_RFS.tar ee PDA ee ODIN wax walba way fiicnaayeen laakiin waxaan helay fariin FASHILAN 🙁 Mar labaad ayaan isku dayay oo FASHILAN ayaa soo baxay mar kale, hada taleefanka waxaa lagu garaacay seddex icons: pc a triangle with a sign calaamadda dhawaaqa iyo taleefan. Gali qaab soo dejiso ganaax. laakiin halkaa kuma dhaafayso. maxaan sameeyaa Waxaan jeclaan lahaa in aan isku dayo talaabooyinka casharkaaga ah si aad u iftiimiso oo aan uga soo kabsado laakiin aad bay ii cabsi gelisaa. Miyaad u maleyneysaa inay shaqeyn doonto? Ma aqaano nooca qalabka wax lagu kaydsado ee aan isticmaalo, wax badan ayaan akhriyay laakiin ma fahmin, waxaan ka baqayaa in gebi ahaanba lumiyo taleefanka gacanta markii si khaldan u iftiimayo.
Waxaan rajeynayaa inaad fadlan i caawin karto. Runtii aad baan u mahadcelin lahaa. Waxaan ka imid Venezuela mana helno doolar, kani waa taleefoonkeyga kaliya iyo taleefanada gacanta 10 jeer ayey ka badan yihiin mushaarka ugu yar 🙁
aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga inaad aqriso tan
Jawaab Estefany Goncalves
My samsung galaxy core i8260l ma qaato wiffi, midna, waxay ii sheegeen inaan ku soo dejinayo soo kabashada, odin iyo i8260lubamg3, hada maxaan sameeyaa ????????? fadlan caawi
Hore ayaan u gaadhay markii ugu horaysay !! Faylka xididka cf lama akhrinayo hadaad sawirka si toos ah uxirato, waa inaad xareysaa feylka .rar (fiiri sawirka ku lifaaqan jabkeena! 😉)
Aad baad u mahadsantahay mashiinka !!
Malag Crs dijo
Haye sidee wax yihiin! ps wax walba way fiicnaayeen ilaa aan ku sugnaa qaabka soo dejinta, ps haa! markii aan shido taleefanka odin .odin wuu garanayaa laakiin markaan ku xiro qaabka soo dejinta wuxuu ii sheegaa in daaqadaha aysan aqoonsanayn oo mid ka mid ah qalabka USB-ga uu shaqeynayo.
Jawaab Angel Crs
HA WALKAAAAAAAAAAAAAA dijo
Cunto waxaan sameeyay wax walba waligeyna ma helin PASS. Hadda fur farriinta Samsung i9000! Tani waxtar ma leh oo waxaan u sameeyay wax walba sidii ay ahayd!
Jawaab MAYA ANDAAAAAAAAAAAAAA
Ma jirtaa wado lagu sameeyo linka, daaqadaha kumana rakibi karo odin taleefankayga gacantu ima aqoonsan karo markaan ku xiro habka kaydinta tirada badan
qumbaha super dijo
ANIGU MA XAFIDO FILILKA KOOWAAD EE QAYBTA ODIN PDA XAL Miyaa?
Ku jawaab supercoco
Mario velasquez dijo
Mudane, waa maxay xalka marka qalabka I9000 uusan ka jawaabin wax isku dhafan oo furayaal ah, ha soo galin qaabka soo dejinta ama qaabka dib u cusbooneysiinta adag? qalabka had iyo jeer wuxuu daaraa hab caadi ah…. Waad ku mahadsantahay jawaabtaada. Salaan.
Ku jawaab Mario Velasquez
Haye saaxiib caawi waxaan faylalka u dhigaa sida uu yahay oo waxaan u siiyaa bilaw kumana sii socdo
Aad baad u mahadsantahay. Cusbooneysii Samsung Galaxy i9000t oo laheyd android 2.1, waad ku cusbooneysiin kartaa 2.3.6, hababkan. Xusuusnow i9000 iyo i9000t waxay la jaan qaadayaan romankooda. Laakiin maaha moodooyinka kale. Salaan
Jawaab ku sii Yefferson
Wax walba waan sameeyay si sax ah laakiin markii aan bilaabayay waxay i weydiineysaa lambar sir ah
Ku jawaab Crisdrian
Lina roza dijo
Si kastaba ha ahaatee, kuidas ayaa ku qotomay meie elus olulised ja kui palju me tahame olla õnnelikud armastatud inimesega, mõnikord pole see lihtne. Me kõik näeme vaeva oma armuelu parandamisega ja oleme lihtsalt õnnelikud.
E-post: (faafaahin @ spelloflife. Org)
Jawaab Lina Roza
BlackBerry Messenger on Android? Wax walba waa suurtagal